समाचार - के तपाई साँच्चै टेम्पर्ड ग्लास चिन्नुहुन्छ?
अपराइट फ्रिजर / कूलर ग्लास ढोका
वाक-इन फ्रिजर / कूलर ग्लास ढोका
भेन्डिङ मेसिन ग्लासको ढोका
छाती फ्रीजर ग्लास ढोका
वाइन क्याबिनेट ग्लास ढोका
एलईडी ग्लास ढोका
के तपाई साँच्चै टेम्पर्ड ग्लास चिन्नुहुन्छ?
टेम्पर्ड वा कडा गिलास एक प्रकारको सुरक्षा गिलास हो जुन सामान्य गिलासको तुलनामा यसको बल बढाउन नियन्त्रण थर्मल वा रासायनिक उपचारद्वारा प्रशोधन गरिन्छ। टेम्परिङले बाहिरी सतहहरूलाई कम्प्रेसनमा र भित्री भागलाई तनावमा राख्छ। त्यस्ता तनावहरूले प्लेट गिलास (उर्फ एनेल्ड गिलास) जस्तै दाँतेदार टुक्राहरूमा टुक्रिनुको सट्टा सानो दानेदार टुक्राहरूमा टुक्रा टुक्रा पार्छ। दानेदार टुक्राहरूले चोटपटक लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ।
यसको सुरक्षा र बलको परिणाम स्वरूप, टेम्पर्ड गिलासलाई यात्रुवाहक सवारीका झ्यालहरू, नुहाउने ढोकाहरू, आर्किटेक्चरल गिलासका ढोकाहरू र टेबलहरू, रेफ्रिजरेटर ट्रे, मोबाइल फोन स्क्रिन प्रोटेक्टरहरू, बुलेटप्रुफ गिलासको एक घटकको रूपमा, विभिन्न माग गर्ने अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। डाइभिङ मास्क, र विभिन्न प्रकारका प्लेट र कुकवेयर।
टेम्पर्ड गिलास annealed ("नियमित") गिलास भन्दा करिब चार गुणा बलियो हुन्छ। निर्माणको क्रममा भित्री तहको ठूलो संकुचनले गिलासको शरीरमा तन्य तनावद्वारा सन्तुलित गिलासको सतहमा कम्प्रेसिभ तनाव उत्पन्न गर्दछ। पूर्ण रूपमा टेम्पर्ड 6-मिमी बाक्लो गिलासको न्यूनतम सतह कम्प्रेसन 69 MPa (10 000 psi) वा किनारा कम्प्रेसन 67 MPa (9 700 psi) भन्दा कम हुनु हुँदैन। यसलाई सुरक्षा गिलास मान्नको लागि, सतह कम्प्रेसिभ तनाव 100 मेगापास्कल (15,000 psi) भन्दा बढी हुनुपर्छ। बढेको सतहको तनावको परिणामको रूपमा, यदि गिलास कहिल्यै भाँचिएको छ भने यो तीखो दाँतेदार टुक्राहरूको विपरीत सानो गोलाकार टुक्राहरूमा मात्र भाँचिन्छ। यो विशेषताले उच्च-दबाव र विस्फोट प्रमाण अनुप्रयोगहरूको लागि टेम्पर्ड ग्लास सुरक्षित बनाउँछ।
यो यो कम्प्रेसिभ सतह तनाव हो जसले टेम्पर्ड गिलासलाई बल बढाउँछ। यो किनभने annealed गिलास, जसमा लगभग कुनै आन्तरिक तनाव छैन, सामान्यतया माइक्रोस्कोपिक सतह दरारहरू बनाउँछ, र सतह कम्प्रेसनको अनुपस्थितिमा, गिलासमा कुनै पनि लागू गरिएको तनावले सतहमा तनाव निम्त्याउँछ, जसले क्र्याक प्रसारलाई ड्राइभ गर्न सक्छ। एक पटक दरार फैलिन थालेपछि, तनाव क्र्याकको टुप्पोमा थप केन्द्रित हुन्छ, जसले गर्दा यो सामग्रीमा ध्वनिको गतिमा फैलिन्छ। फलस्वरूप, annealed गिलास नाजुक छ र अनियमित र तीखो टुक्राहरूमा टुक्रिन्छ। अर्कोतर्फ, टेम्पर्ड गिलासमा कम्प्रेसिभ तनावमा दोष हुन्छ र यसको प्रसार वा विस्तारलाई रोक्छ।
कुनै पनि काटन वा पीस टेम्परिंग अघि गर्नुपर्छ। टेम्परिङ पछि काट्ने, पीस्ने र तीखो असरहरूले गिलासलाई भाँच्न सक्छ।
टेम्परिङको परिणाम स्वरूप स्ट्रेन ढाँचालाई अप्टिकल पोलाराइजर मार्फत हेर्न सकिन्छ, जस्तै ध्रुवीकरण सनग्लासको जोडी।
टेम्पर्ड ग्लास प्रयोग गरिन्छ जब बल, थर्मल प्रतिरोध, र सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विचारहरू छन्। उदाहरणका लागि, यात्रुवाहक सवारी साधनहरूमा तीनवटै आवश्यकताहरू हुन्छन्। तिनीहरू बाहिर भण्डारण गरिएको हुनाले, तिनीहरू निरन्तर ताप र शीतलनको साथसाथै वर्षभरि नाटकीय तापमान परिवर्तनहरूको अधीनमा छन्। यसबाहेक, तिनीहरूले ढुङ्गा र सडक दुर्घटनाहरू जस्तै सडक मलबेबाट साना प्रभावहरू सामना गर्नुपर्छ। किनभने ठूला, तीखो काँचका टुक्राहरूले यात्रुहरूलाई थप र अस्वीकार्य खतराहरू प्रस्तुत गर्दछ, टेम्पर्ड ग्लास प्रयोग गरिन्छ ताकि यदि भाँचियो भने, टुक्राहरू धमिलो र प्रायः हानिरहित हुन्छन्। विन्डस्क्रिन वा विन्डशिल्ड यसको सट्टा लेमिनेटेड गिलासबाट बनेको हुन्छ, जुन टुक्रामा टुक्राटुक्रा हुँदैन जब छेउका झ्यालहरू र पछाडिको विन्डशिल्ड सामान्यतया टेम्पर्ड गिलास हुन्छन्।
टेम्पर्ड गिलासको अन्य विशिष्ट अनुप्रयोगहरू समावेश छन्:
पौडी खेल्ने पोखरी
नुहाउने ढोका र बाथरूम क्षेत्रहरू
प्रदर्शनी क्षेत्रहरू र प्रदर्शनहरू
कम्प्युटर टावर वा केसहरू
भवन र संरचनाहरू
टेम्पर्ड गिलास भवनहरूमा पनि फ्रेम नगरिएको एसेम्बलीहरू (जस्तै फ्रेमलेस गिलासका ढोकाहरू), संरचनात्मक रूपमा लोड गरिएका अनुप्रयोगहरू, र मानव प्रभावको घटनामा खतरनाक हुने कुनै पनि अनुप्रयोगहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ। संयुक्त राज्यमा बिल्डिङ कोडहरूलाई केही स्काइलाइटहरू, ढोकाहरू र सीढीहरू नजिक, ठूला झ्यालहरू, भुइँ तहको नजिक फैलिने झ्यालहरू, स्लाइडिङ डोरहरू, लिफ्टहरू, फायर डिपार्टमेन्ट पहुँच प्यानलहरू, र पौंडी पोखरीहरू सहित धेरै परिस्थितिहरूमा टेम्पर्ड वा ल्यामिनेटेड गिलास चाहिन्छ।
घरमा टेम्पर्ड ग्लास पनि प्रयोग गरिन्छ। टेम्पर्ड गिलास प्रयोग गर्ने केही सामान्य घरायसी फर्निचर र उपकरणहरू फ्रेमलेस नुहाउने ढोका, गिलासको टेबल टप, गिलासको सेल्फ, क्याबिनेट गिलास र फायरप्लेसका लागि गिलास हुन्।
"रिम-टेम्पर्ड" ले संकेत गर्छ कि सीमित क्षेत्र, जस्तै गिलास वा प्लेटको रिम, टेम्पर्ड छ र खाना सेवामा लोकप्रिय छ। यद्यपि, त्यहाँ विशेषज्ञ निर्माताहरू पनि छन् जसले पूर्ण रूपमा टेम्पर्ड/कठोर पेयवेयर समाधान प्रस्ताव गर्दछ जसले शक्ति र थर्मल झटका प्रतिरोधको रूपमा बढ्दो फाइदाहरू ल्याउन सक्छ। कतिपय देशहरूमा यी उत्पादनहरूलाई कार्यसम्पादन स्तर बढाउन वा तीव्र प्रयोगका कारण सुरक्षित गिलासको आवश्यकता पर्ने ठाउँहरूमा निर्दिष्ट गरिन्छ।
टेम्पर्ड गिलासले बार र पबहरूमा विशेष गरी युनाइटेड किंगडम र अष्ट्रेलियामा भाँचिएको गिलासलाई हतियारको रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्नको लागि बढ्दो प्रयोग देखेको छ। टेम्पर्ड ग्लास उत्पादनहरू होटेलहरू, बारहरू र रेस्टुरेन्टहरूमा भंग कम गर्न र सुरक्षा मापदण्डहरू बढाउनको लागि फेला पार्न सकिन्छ।
खाना पकाउने र बेकिंग
टेम्पर्ड गिलासका केही रूपहरू खाना पकाउन र बेकिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ। निर्माताहरू र ब्रान्डहरूमा Glasslock, Pyrex, Corelle, र Arc International समावेश छन्। यो पनि ओभन ढोका लागि प्रयोग गिलास को प्रकार हो।
टेम्पर्ड गिलास थर्मल टेम्परिङ प्रक्रिया मार्फत annealed गिलासबाट बनाउन सकिन्छ। गिलासलाई रोलर टेबलमा राखिएको छ, यसलाई भट्टीबाट लैजान्छ जसले यसलाई यसको संक्रमणको तापमान 564 °C (1,047 °F) माथि 620 °C (1,148 °F) माथि राम्रोसँग तताउँछ। त्यसपछि गिलासलाई जबरजस्ती हावा ड्राफ्टको साथ द्रुत रूपमा चिसो गरिन्छ जबकि भित्री भाग छोटो समयको लागि प्रवाह गर्न स्वतन्त्र रहन्छ।
वैकल्पिक रासायनिक कठोर प्रक्रियामा कम्तिमा ०.१ मिलिमिटर बाक्लो गिलासको सतहको तहलाई पोटासियम आयनहरू (जुन ३०% ठूला हुन्छन्) सँग गिलासको सतहमा रहेको सोडियम आयनहरूको आयन आदानप्रदानद्वारा कम्प्रेसन गर्न बाध्य पारिन्छ। पग्लिएको पोटासियम नाइट्रेट। रासायनिक कठोरताले थर्मल टेम्परिङको तुलनामा कडापन बढाउँछ र जटिल आकारका गिलास वस्तुहरूमा लागू गर्न सकिन्छ।
टेम्पर्ड गिलासलाई आकारमा काट्नु पर्छ वा टेम्परिंग गर्नु अघि आकारमा थिच्नु पर्छ, र एक पटक टेम्पर गरेपछि पुन: काम गर्न सकिँदैन। टेम्परिङ प्रक्रिया सुरु हुनु अघि किनाराहरू पालिस गर्ने वा गिलासमा प्वालहरू ड्रिल गर्ने कार्य गरिन्छ। गिलासमा सन्तुलित तनावको कारणले गर्दा, कुनै पनि भागमा हुने क्षतिले अन्ततः थम्बनेल आकारका टुक्राहरूमा गिलास चकनाचूर हुन्छ। गिलासको छेउमा भएको क्षतिको कारण गिलास फुट्नको लागि सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ, जहाँ तन्य तनाव सबैभन्दा ठूलो हुन्छ, तर गिलास फलकको बीचमा कडा प्रभाव पर्दा वा प्रभाव केन्द्रित भएमा चकनाचूर हुन सक्छ। (उदाहरण को लागी, कडा बिन्दु संग गिलास प्रहार)।
टेम्पर्ड गिलासको प्रयोगले केही परिस्थितिहरूमा सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्छ किनभने काँचको झ्यालको फ्रेममा टुक्राहरू छोड्नुको सट्टा कडा प्रभावमा पूर्ण रूपमा चकनाचुर हुने प्रवृत्ति हुन्छ।
टेम्पर्ड गिलासको सतहले सपाट रोलरहरूसँग सम्पर्कको कारणले सतह तरंगहरू प्रदर्शन गर्दछ, यदि यो यो प्रक्रिया प्रयोग गरेर गठन गरिएको हो। यो लहरापन पातलो फिल्म सौर्य कोशिकाहरूको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण समस्या हो। फ्लोट गिलास प्रक्रिया विभिन्न ग्लेजिंग अनुप्रयोगहरूको विकल्पको रूपमा धेरै समतल र समानान्तर सतहहरूसँग कम-विरूपण पानाहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
निकेल सल्फाइड दोषहरूले यसको निर्माणको वर्ष पछि टेम्पर्ड गिलासको सहज भंग हुन सक्छ।
पोस्ट समय: जुलाई-20-2020
Qingdun गाउँ, Zhongguan टाउन, Deqing काउन्टी, Zhejiang प्रान्त, Prc
विशेष उत्पादनहरू - साइटम्याप